आज जन्मदिन मनाउने ४ चर्चित अनुहार : ह्याप्पी बर्थ डे-सिताराम, प्रियाना, सुगम र उपासना – live 60media
ह्याप्पी बर्थ डे उपासना :
चलचित्र क्याप्टेनबाट नेपाली चलचित्र जगतमा आएकी नायिका उपासना सिंह ठकुरीले दोस्रो चलचित्र कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डीमा पनि अभिनय गरिन । आज उनै नायिका उपासना सिंह ठकुरीको जन्मदिन परेको छ । उपासनाको जन्मदिन परेकाले दर्शकले उनलाई सामाजिक सञ्जालमा शुभकामना समेत दिइरहेका छन् । चलचित्र कबड्डी कबड्डी कबड्डी मा उपासनाको कामको तारिफ भएको थियो ।
ह्याप्पी बर्थ डे सिताराम कट्टेल :
यस्तै, सबैका प्रिय समाजसेवी एवं लोकप्रिय हास्यकलाकार सिताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’को पनि आज जन्मदिन परेको छ । कट्टेलको जन्म वि.सं. २०४० मा बुवा बोगराज कट्टेल र आमा कमला कट्टेलको जेठो सन्तानको रूपमा हिमाली जिल्ला सोलुखुम्बुको नेचा वेदघारीमा आजकै दिन भएको थियो । सीतारामले बाल्यकाल झापामा बिताएका हुन् । झापाबाट कलाकार बन्ने सपना मन भरी बोकेर काठमाडौँ आइपुगेका सीताराम कट्टेलले धेरै सङ्घर्ष गरेर ‘धुर्मुस’ नाम जन्माएका थिए । मेरी बास्सैमा सीतारामले अभिनय गरेको ‘धुर्मुस’ पात्रले चर्चा र लोकप्रियता कमायो । अर्का हास्य कलाकार कुन्जना घिमिरे ‘सुन्तली’संग बिवाह बन्धनमा बाधिएका उनी यतिबेला समाजसेवा संगै कलाकारितामा ब्यस्त छन् ।
ह्याप्पी बर्थ डे सुगम पोख्रेल :
यस्तै नेपाली सुगम संगीतका लोकप्रिय गायक सुगम पोख्रेलको पनि आजकै दिनमा जन्मदिन परेको छ । मोरङको मङलबारेमा जन्मिएका उनी विकिपिडियाका अनुसार ४० लागे । सन १९७९ को सेप्टेम्बर २० मा जन्मिएका उनको धेरै गीतहरु नेपाली संगीत प्रेमिहरुमा आजको दिनसम्म पनि ताजै छ । उनी रेडियो कार्यक्रम प्रस्तोता पनि हुन । उनले पहिलो पटक एकल गायनमा ‘मेरो संसार’ बोलको गीत रेकर्ड गराएका थिए
ह्याप्पी बर्थ डे प्रियाना आचार्य :
यता, भद्रगोलबाट हास्य कलाकारको परिचय बनाएकी मुन्नीको पनि आजकै दिन जन्मदिन परेको छ । जन्मदिन परेको थाहा पाउने सुभचिन्तक तथा फ्यानहरुले उनलाई बिहानै देखि सुभकामना दिरहेका छन् । उनको वास्तविक नाम प्रियाना आचार्य हो । भद्रगोलमा उनको सुन्दरता र अभिनयलाई निकै दर्शकले रुचाएका छन् । मुन्नी थिएटरकी कलाकार हुन् । उनले थुप्रै नाटकमा अभिनय गरेकी छिन् ।
← दुनियाँ नै चकित हुने यो एक घ´टना !
यी ३ याेगमा जन्मिएका मानिसलाई धन, वृद्धि र लक्ष्मीको कृपा सधै रहन्छ →
शौचालयमा मोबाइल चलाउने बानी छ भने आजैबाट छाट्नुहोस यो बानी यस्तो सम्म खत्रा हुनसक्छ
श्रीमतीसँग सुतेका श्रीमानले रा ती साढे २ ब जे पलङमुनिबाट केटाको आवाज आए पछि हेर्दा